सधैं रित्तै विशिष्ट कक्ष- सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
सधैं रित्तै विशिष्ट कक्ष
सरकारी अस्पतालहरूमा सर्वसाधारण बिरामीका लागि भर्ना हुन बेड कहिल्यै खाली हुँदैन  । शिष्ट/‘भीभीआईपी बेड’ सधैं खाली हुन्छ, किन ? भीभीआईपी कोठा खोलेर हेर्‍यो भने माकुराको जालो, धुलो र कसिङ्गर बाहेक केही भेटिँदैन  ।
वर्षौंदेखि हालिएको तन्ना धुलोमैलोले भरिएको हुन्छ । तर गणतन्त्रपछि कोही पनि भीभीआईपी त्यो कक्षमा गएर उपचार गरेको थाहा छैन । शिक्षण अस्पतालमा इमर्जेन्सीमा बेड खाली नभएर एउटै बेडमा ३ जना सुताएर उपचार गर्नुपरेको कारुणिक दृश्य देख्न सकिन्छ । बाहिर जिल्लाबाट राजधानीमा राम्रो उपचार पाइन्छ भनेर आउने बिरामीहरू बढिरहेका छन् । ‘भीभीआईपीहरू’ ले उपचार गर्न सरकारी अस्पतालमा गए पो त्यहाँको वस्तुस्थिति थाहा हुने थियो । सर्वसाधारणले कसरी उपचार गराइरहेका छन् ? उपचार गर्न जाँदा कति कष्ट भोग्नुपरेको छ ? अस्पतालको व्यवस्थापन कसरी चलेको छ ? डाक्टरहरूले समयमा उपचार गरेका छन् कि छैनन् ? सरकारी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरू प्रायःजसोको आफ्नो निजी क्लिनिक छ । उनीहरू अस्पतालमा भन्दा बढी समय आफ्नो क्लिनिकलाई दिइरहेका छन्् । अझ कतिपयले त सिधै फलानो क्लिनिकमा आउनु भनेको समेत सुनिन्छ । यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानसकेको छैन ।
वीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज जस्ता अस्पतालहरूमा सधैं भीभीआईपी सिट खाली नै हुन्छ । आदर्शका कुरा गरेर नथाक्ने हाम्रा उच्चपदस्थहरू रोग निदान गर्न विदेशका महंँगा अस्पताल धाउँछन् । यहाँ उपचार गराउँदैनन् । यहाँ उपचार नहुने रोगका लागि विदेश जानु ठिकै हो । तर सामान्य रोग लाग्दा पनि विदेश जानु भनेको यहाँको उपचार पद्धति र चिकित्सकप्रति विश्वास नगर्नु हो । सुविधा सम्पन्न सरकारी अस्पतालहरू छन्् । विशेषज्ञ डाक्टरहरू पनि छन् । उपचारका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरू पनि छन् । तर पनि उपचारका लागि विदेश नै जान्छन् । भीभीआईपीहरूलाई किन विदेश मोह भएको हो ? सामान्य नागरिक सिटामोल खान नपाएर मर्ने देशका उच्चपदस्थहरू आफूहरू भने सरकारी खर्चमा सिंगापुर, थाइल्यान्ड जँचाउन जान्छन् । यो बेथिति कहिले रोकिएला ?
सबै प्रदेश प्रमुख बर्खास्त
देउवा सरकारले नियुक्त गरेका सातवटै प्रदेश प्रमुखलाई ओली सरकारले एकैचोटि पदमुक्त गरेर गणतन्त्र नेपालका सबै प्रदेशहरू प्रमुखविहीन बनाएको खबरले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको दूरी बढाउने अनुमान गर्न सकिन्छ  ।
आलंकारिक प्रदेश प्रमुखहरूलाई निकट आइरहेको उपनिर्वाचन सम्मुख पदच्युत गर्नु पछाडि कुनै रहस्य लुकेको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको अस्वस्थ अवस्थामा लिइएका यस्ता निर्णयले राजनीतिलाई पनि अस्वस्थ नबनाओस् ।